4 BUTTONS Remot Key Fob 3 + 1 Button 315MHz / 433mhz maka Porsche Cayenne 2004-2011 nwere ID46 mgbawa Uncut HU66 agụba
Key Fob 3 + 1 Button 315MHz / 433mhz maka Porsche Cayenne Uncut Condition: 100% ohuru & Oke mma & Wholasale Buttons: 3 + 1 bọtịnụ Frequency: 315 / 433MHz (pls họrọ oge kwesịrị ekwesị ịchọrọ) ya (maka ntụnye): 2004-2011 maka Cayenne Igodo ọhụụ na-abịa na bọọdụ sekit / batrị. Key kwesịrị na-kenyere site na ọkachamara akpakanamde Ulo olu. Igodo agụba kwesịrị ka ebipụ, kwa. Rịba ama ịbụ ...
3 Button Remote Key Fob 315MHz / 433mhz maka Porsche Cayenne 2004-2011 nwere mgbaaka ID46 Uncut agụba
Atụmatụ: Akwa dị elu N'ogbe dị 100% akara ọhụụ zuru oke na igodo igodo na transponder * Frequency: 315 / 433Mhz * ID46 chip Fit for: For Porsche Cayenne 2004-2011 Rịba ama tupu ịzụta: Pls jide n'aka na igodo gị bụ kpọmkwem sams dị ka nkọwa anyị ,, ekele !!! Ga-emerịrị ihe mgbaaka nke na - eme ka ị ghara ijikọ ma malite ụgbọ ala. Kwesịrị ịgakwuru onye na-ere ahịa ma ọ bụ mkpọchi maka mmemme. Onweghi ntuziaka n'aka onye oru ime ya n'onwe ha ...
Ihe a na-ere ere bụ igodo dịpụrụ adịpụ nke Mee N'onwe Gị. Nke a bụ ihe zuru ezu dịpụrụ adịpụ na eriri sekit n'ime na mgbawa Nkebi nke Nọmba: Keyless-go Frequency: 315/433/434 MHz Immobilizer: No Key Blade: ee Circuit board: Ee Battery: Ee Isi igodo ahụ kwesịrị imepụta ihe mkpuchi igwe na-arụ ọrụ tupu iji . Nkwupụta dị mkpa - ọnụ ọgụgụ akụkụ ga-adakọrịrị. Ọ bụrụ na adabaghị, ọ gaghị arụ ọrụ. dakọtara ： For Porsche Panamera For Porsche Macan For Porsche Cayman For Porsche 911 For Porsche ...
N'ihi na Nissan ọhụrụ Anwụ na-acha 3 + 1 button ime igodo na 315mhz na 46-PCF7952
N'ihi na Nissan ọhụrụ Anwụ na-acha 3 + 1 button ime igodo na 315mhz na id46-PCF7952 nkọwa: Logo: Ọ dịghị :dị: Remote Key Shell maka Nissan Teana Altima Maxima Arọ: 40g Ihe: ABS + Agba Agba: Black bọtịnụ: 4 bọtịnụ Transponder Mgba: ID46Chip Kọmputa Kọmputa: 315Mhz Batrị: Enweghị Ngwa: maka Nissan Teana Altima Maxima na ụdị ndị ọzọ nke dị ka foto anyị! Anyị na-enye ụdị ụgbọ ala dị iche iche: IHE BMW / FOR Acura / FOR Alfa / FOR Audi / FOR Benz / FOR BMW / FOR Buick / FOR Ca ...